Arovy aho amin'ireo mpanaraka - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Day-by-Day > Arovy amin'ny mpanaraka ahy
«Izay miarahaba anareo dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray izay naniraka Ahy. Izay ... mandray ny olo-marina satria olo-marina izy, dia handray ny valim-pitia ho an’ny marina ( Matio 10, 40-41 fandikan-teny mpihinana).
Ny antokom-pinoana izay tarihiko (tombon-tsoa ho ahy izany) ary ny tenako dia nandalo fiovana lehibe teo amin'ny finoana sy ny fampiharana an'io finoana io nandritra ny roapolo taona lasa. Voafatotry ny ara-dalàna ny fiangonantsika ary maika ny fanekena ny filazantsaran’ny fahasoavana. Tsapako fa tsy ny rehetra no afaka manaiky ireo fiovana ireo ary ny sasany dia ho tezitra mafy amin’izany.
Tsy nampoizina anefa ny haavon'ny fankahalana natao tamiko manokana. Ny olona milaza ny tenany ho Kristianina dia tsy nampiseho firy ny Kristianisma. Nisy nanoratra tamiko mihitsy hoe hivavaka ho an’ny hahafatesako eo no ho eo. Nilaza tamiko ny hafa fa te handray anjara amin'ny famonoana ahy izy ireo. Nahazo fahatakarana lalina kokoa aho rehefa nilaza i Jesosy fa izay te hamono anao dia hihevitra fa manao an’Andriamanitra6,2).
Hoy ny Baiboly: “Tsy ao anatin’ny fitiavana ny tahotra”. Mifanohitra amin’izany, “ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra” (1. Johannes 4,18). Tsy milaza akory izy io fa mandroaka ny fitiavana ny tahotra lavorary. Rehefa mahatsiaro izany rehetra izany aho, dia tsy mampahory ahy intsony ny fanafihana manokana. Afaka mitia izay mankahala ahy aho satria tia azy ireo Jesosy, na dia tsy fantany tsara aza ny fihetsehan’ny fitiavany. Manampy ahy haka aina kely kokoa ny zava-drehetra.